Nkọwa:Android 8.1 Astra J 2011-2012,Astra J 2011-2012 Dvd,Android 8.1 Car Dvd
Home > Ngwaahịa > Buick Android Car Dvd > Android 8.1 Astra J 2011-2012 Car Dvd
Ihe Nlereanya.: KD-1047
1, DAB: Short maka mgbasa ozi dijitalụ dijitalụ, DAB dị ka teknụzụ redio dijitalụ di elu maka mgbasa ozi redio na-ejikọ ọtụtụ atụmatụ iji belata nsogbu nnyonye anya na mkpọtụ mkpọtụ. N'iburu ụda dị elu, ọ na-enye ọtụtụ mmemme redio karịa otu ụdị karịa redio redio analog. Na mgbakwunye, DAB nwere ike ọ bụghị naanị ilele ọdụ niile dịnụ, na-enye ndepụta maka gị ịhọrọ site, mana na-enyekwa ozi ezigbo oge dịka aha egwu, ụdị egwu na mmelite ma ọ bụ mmelite okporo ụzọ. Ọ bụ nhọrọ kacha mma maka ndị hụrụ redio n'anya na ndị na-anụ egwu.
2, TPMS: Ejikọtara nke ọma na isi nke a na ntinye dị mfe, TPMS na-akọ akụkọ ezigbo ike taya site na ngosipụta foto ma ọ bụ ọkụ ịdọ aka na ntị dị ala iji nyere gị aka ịchekwa oriri ọkụ, ịgbatị ndụ taya, belata obere oge. na ndozi ma nwekwuo arụmọrụ gburugburu ebe obibi. Recognitionmata mbido taya taya nke TPMS nyere nwere ike zere ihe ọghọm okporo ụzọ iji meziwanye nchekwa na usoro ịkwọ ụgbọala niile.
3, Igwefoto ndabere: Ọ na - agbakwunye igwefoto ndabere maka ịgbanwee na-akpaghị aka na foto ebe a na-adọba ụgbọala mgbe ị na-atụgharị. Nhọrọ a gụnyere igwe anaghị egbochi ọhụụ na igwefoto nkwado ndabere nke abalị nke a ga-etinyego n'ọnọdụ ọfụma ikike ikikere ụgbọ ala gị na eriri maka njikọ ya. Igwefoto elele nke ndabere na-eji wired. Ọ bụrụ na ịchọrọ nke ikuku ikuku, biko zitere anyị ihe edeturu mgbe ịbenyesiri ịtụ.
4, DVD ọkpụkpọ: N’ime otu DVD a DVD, ị nwere ike igwu CD na DVD diski. Iji mgbochi ujo na teknụzụ ebe nchekwa ikpeazụ nwere itinye n'ọrụ, ịnwere ike ilele ihe nkiri ma ọ bụ vidiyo na-emegharị. Formdị dịka DVD / DIVX / MP4 / MP3 / MP2 / VCD dakọtara.
Ihe osise nke Android 8.1 Astra J 2011-2012 Car Dvd :
Actorylọ ọrụ na ụlọ ihe atụ nke Klyde gam akporo 8.1 Astra J 2011-2012 Car Dvd:
Ngwa nke gam akporo 8.1 Astra J 2011-2012 Car Dvd :
ọtụtụ ihe ntụrụndụ ụgbọala na-ewu ewu maka TOUAREG 2015-2016 Kpọtụrụ ugbu a
sistemụ igwe eleba anya ụgbọ ala nke gps maka JUKE 2014-2016 Kpọtụrụ ugbu a
redio ụgbọ ala nwere gps maka Cayenne 2006-2010 Kpọtụrụ ugbu a
na dash car system system for Swift 2018 Kpọtụrụ ugbu a
Android 8.1 Astra J 2011-2012 Astra J 2011-2012 Dvd Android 8.1 Car Dvd Android 9.0 Astra K 2016-2017 Android Astra J 2012 Android 8.1 Fit 2014-2015 Astra J 2011-2012 Android Maka I40 2011-2014